Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 26, 2022 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kuziva kunyora zvakanaka kubasa chinhu chinodiwa chine maitiro akanaka pamufananidzo wako, asiwo iyo yekambani yaunoshanda mairi. Chokwadi, vaverengi vanowana zano remutauri wavo kuburikidza nemameseji avanogamuchira kubva kwaari. Saka zvakakosha kuita chimiro chakanaka nekugadzira kunyora kwemhando. Nzira yekunyora zvakanaka sei kubasa? Izvi ndizvo zvauchawana muchinyorwa chino.
Mutemo wenhamba 1 wekunyora zvakanaka kubasa ndeyekutora maitiro akarurama uye akajeka. Kuti uite izvi, zvinotevera zvinofanirwa kuteedzerwa sechinhu chakakosha:
Iyo syntax : zvinoreva marongerwo emashoko uye kuvakwa kwemitsara.
Kushandisa mashoko akakodzera : mubvunzo wekushandisa akajairika uye ari nyore kunzwisisa mazwi. Izvo zviri nyore duramazwi kuita decode, nekukurumidza muverengi anonzwisisa.
Lexical spelling uye chiperengo chegirama: vanoreva kunyorwa kwemazwi uye kune zvibvumirano zvevakadzi, zvisikwa, nhamba, nezvimwe.
Punctuation: chero kunaka kwekunyora kwako, zvichanetsa kuti muverengi anzwisise pfungwa yako kana nyora dzemutauro dzisingaremekedzwe.
Tarisa pane kupfupika
Kunyora zvakanaka pabasa, kupfupika chinhu chisingafanirwe kufuratirwa. Tinotaura nezvechinyorwa chipfupi kana chichitaura pfungwa nenzira iri nyore uye pfupi (mumashoko mashoma). Iwe unofanirwa kubvisa mitsara yakareba isingawedzere zvakanyanya nekuipfupisa nekubvisa mazwi asina basa.
Kunyora zvine mwero, zvinokurudzirwa kudzivirira banal uye boilerplate mafomula. Zvakare, ramba uchifunga kuti basa rekutanga rekunyora kwako ndere kupa chiitiko kana ruzivo rweanogamuchira.
Mupfungwa iyi, ona kuti mutsara unofanirwa kunge uine mazwi ari pakati pe15 ne22.
Nangidzira pazviri nyore
Kureruka kwakakosha kana iwe uchida kubudirira mukunyora zvakanaka pabasa. Pano zvakare, panofanira kufungidzirwa kuti pfungwa yakaenzana nemutsara. Chokwadi, muverengi anogona kukurumidza kurasika kana paine zvidimbu zvakawanda mukati memutsara mumwe.
Nokudaro pfungwa huru inotsanangurwa nemitsetse yakapfava inoita kuti zvibvire kunyora ndima iri nyore kurava uye iri nyore kunzwisisa.
Saka yeuka kunyora mitsara mipfupi uye dzivisa mitsara yakareba. Zvakakoshawo kuisa chiito che conjugated pamwero wemutsara wega wega. Kutaura zvazviri, yeuka kuti chiito ndicho chinopa zvinoreva mutsara. Ichi ndicho chikonzero nei vaverengi vazhinji vachitsvaga kuiwana semusikirwo panguva yekuverenga.
Yakarongeka ita shuwa kuti mazwi ako ane musoro
Chekupedzisira, kunyora zvakanaka kubasa, unofanirwa kuve nechokwadi chekuenderana kwezvinyorwa zvako, kureva kufunga kwavo. Zvechokwadi, kuwirirana kunokurudzira kunzwisisa. Ichave mubvunzo panguva yekunyora zvinyorwa zvako kuti uve nechokwadi chekuti haina kupokana.
Zvikasadaro, muverengi wako anogona kuvhiringwa nezvinhu zvisingaite. Zvechokwadi, chinyorwa chisina kurongeka uye chisinganzwisisiki zvachose chichagumbura zvikuru vatauri vako.
Nzira yekunyora sei zvinobudirira kubasa? Ndira 31, 2022Tranquillus
pashureMazano anobhadharwa nekadhi rechikwereti asingabhadhari mutero uye kuchengetedzwa kwevanhu
zvinoteveraMutungamiriri weFrance weEuropean Union: kusimbisa kubatana kweEuropean pakatarisana nedambudziko re cyber
Nyora email kana usipo